Madaxweynihii hore ee Puntland Cadde Muuse oo Garowe soo gaaray. – Radio Daljir
Janaayo 1, 2013 12:16 g 0
Garowe, January, 01, 2013 – Madaxweynihii hore ee Dawladda Puntlan General Maxamuu Muuse xirsi? (Cadde)? oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa galabta? safar dhulka ah ku yimid magaalada Garoowe ee xarunta Dawladda Puntland.
Gen/ Cadde Muuse ayaa? shalay? magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar kulamo kula qaatay wax garadka gobolkaas isagoona kala hadlayey arimo quseeya xaaladaha kala duwan ee? xilligaan ka jira Puntland, sida uu sheegay mar uu shalay saxaafadda kula hadlay isla magaalada Qardho
Sidoo kale. Madaxwayne Cadde Muuse waxaa uu maal-mihii ugu dambeeyay uu Qardho kulamo kula qaatay ?qaar kamida wefdigii Nabadoonada ahaa ee dhawaan ka laabtay magaalada Garoowe. Sida uu Daljir u xaqiijiyay wakiilka gobolka Karkaar ee Daljir Muxuyadiin Hiirad Kaatoon.
Madaxwayne Maxamuud Muuse Xirsi General Cadde Muuse ayaa wali wax faah-faahin ah ka bixin socdaalka uu Garowe ku yimid, waxaana la filayaa in xilliyada soo socda uu la hadli doono waraahinta. Waxaana socdaalkiisu uu kusoo aadayaa xilli ay jirto xiisad siyaasadeed oo salka ku haysa? muranka mudada dawladda hadda jirta.
Cabdi Xassan Rooble (Awoowe)
Radio Daljir Garowe.?
Daljir oo hambalyada 2013 u diray bulshada Soomaaliyeed, soona bandhigay qorshaha 2013-ka (DHAGAYSO)